Blockchain Izindaba 24 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
Investments Ufiphazo ukuqalisa izimali cryptocurrency entsha ezinhlanu 2018
ukwenza mhlophe Investments, okwakwenza kube lula zimali bemikhakha ehlukene ukugembula on Bitcoin, uhlela ukunikeza omusha oyedwa lwemali izimali ezine mfihlo nomunye ngokusekelwe ubhasikidi zezimali digital ekuqaleni Apreli.
"Ekupheleni kuka-ngekota yokuqala ka kulo nyaka, sizobe unenani imikhiqizo eziyisishiyagalombili utshalomali,"Ufiphazo Managing Director Michael Sonnenshein lapho kuxoxwa ngoLwesibili e Vancouver.
yasekuqaleni Bitcoin Investment Trust Ufiphazo sika, okuyinto yezandla phezu-the-counter Emelika, uye angena ngomfutho ezingaphezu kuka 1,300 amaphesenti ngonyaka odlule njengoba abatshalizimali tetikhungo enqatshelwa ukuthenga zemali digital ngokuqondile nokho ukufuna ukuchayeka okuye kwafinyelelwa cryptocurrencies.
Sonnenshein wathi izimali yayiyobizwa olwakhiwe efana Bitcoin Investment Trust, akunika zimali ikhono sithole ukuchayeka kwizimali digital ngokusebenzisa ukuthengwa yesibambiso.
Sonnenshein wathi "Lokho imoto izobamba phezulu zezimali ketshezi digital, kuyoba emakethe cap-isisindo, futhi olinganiselayo nsuku emva kwezinyanga ezintathu. "
I eqinile ezinze eNew York is "ukugcina ezindlebeni zethu ivulekele yini zimali abafuna ukuchayeka,"Sonnenshein wathi. "Uma kukhona zezimali ezithile abagcini zimali ucela lethu ukuhlela imikhiqizo emhlabeni, ke sifuna ukuba lapho ukuba sanelise leso sidingo. "
Weiss isilinganiso ejensi ikhipha amamaki on cryptocurrencies – Bitcoin uthola C +
Weiss Izilinganiso, ehamba phambili ezimele isilinganiso ejensi zesizwe weemali, namuhla kudedela yokuqala ngqa amamaki zesizwe ku cryptocurrencies ngumuntu wezimali isilinganiso ejensi.
Okwenza entry Weiss 'ku cryptocurrency izilinganiso okuphawulekayo emlandweni walo wokuzibusa ukunemba kweminye imikhakha utshalomali, njengoba kwaphawula u-U.S. Uhulumeni Ukuziphendulela Office (Gao), Barron sika, I-Wall Street Journal, futhi New York Times, phakathi kwabanye.
I Weiss Cryptocurrency Izilinganiso ukuhlola entengo, umvuzo ezingaba, ubuchwepheshe blockchain, ukutholwa, ukuvikeleka, nezinye izinto. "Ngenxa yezinguquko okusheshayo e idatha,"Kuchaza Weiss, "Ukulungiswa kanye downgrades ziyinsakavukela ezingaphezu kuka kweminye imikhakha esizihlanganisayo."
Bitcoin (ukalwe C +) uthola izikolo esihle kakhulu ezokuphepha kanye ukutholwa okwandile. Kodwa kuhlangabezana inethiwekhi netivimba ezinkulu, okubangela ukubambezeleka okusezingeni eliphezulu ukuthengiselana izindleko. Naphezu kwemizamo okukhulu okuqhubekayo ukuthi ekufezeni zibe nempumelelo ethile kokuqala, Bitcoin ayinakho indlela esisheshayo ngokushesha nokuthuthukela ikhodi yayo isofthiwe.
Weiss Izilinganiso, olwaqala ngo 1971, amazinga 55,000 izikhungo kanye nokutshalwa. Ngokungafani Standard & abahluphekayo, uMoody, Fitch futhi A.M. Kuhle, Weiss akayithathi isinxephezelo kwanoma yiluphi uhlobo kusukela izinhlangano ke Silinganisa.
Umugqa iphela Bitcoin ukweseka
Inkokhelo processor umugqa ayisayisekeli Bitcoin njengoba indlela yokukhokha eliqala ngo-April 2018.
Umugqa waqala nokwamukela Bitcoin e 2014 kodwa manje ikhombe kufakelwa Bitcoin futhi izikhathi isiqinisekiso kuqhathaniswa kancane njengoba ukucabanga sokuqeda ubuhlobo baso Bitcoin.
uhulumeni waseNingizimu Korea uhlola cryptocurrency Ukuhwebelana’ ukuvikeleka
South Korean Bitcoin Ukuhwebelana abangu zihlolwe namazinga zokuphepha noyedwa hlangana, ngokuvumelana uhulumeni waseNingizimu Korea. Ngamunye the 8 Ukuhwebelana zihlolwe abangu uthathwa “enganele” kanye nezincomo benziwa ukuze uthuthukise ukuvikeleka kwabo.
Imithetho emisha kuzokhulisa izinhlawulo kanye imingcele isikhathi lezi Ukuhwebelana uthuthukise ukuze kuhlangatshezwane nezidingo noma ukubhekana Ukuvalwa kungenzeka.
Lokhu kubonisa uhulumeni waseNingizimu Korea kuthatha cryptocurrency Ukuhwebelana sina nokungamagugu yezokuphepha.
Digital lwemali uMcwaningi Mabhuku Friedman LLP kususa konke lapho kukhulunywa khona Bitfinex kusuka kuwebhusayithi
Friedman LLP, lwemali digital mabhuku isevisi, ngisuse noma ukuphathwa yangaphambilini ye Bitfinex njengendlela amaklayenti, futhi ngisuse noma nokuphathwa kwegama labo kuwo izindaba zabo okuphakelayo.
Lokhu kuza ngesikhathi lapho izinsolo sikhule budlelwane emkhatsini Bitfinex kanye njengemodemu njengoba USDT (njengemodemu amathokheni) ayengezwa kubalwa ngu million kuleli sonto esidlule.
Idolobha elikhulu e Vermont ukusebenzisa blockchain izwe ebhukwini amarekhodi
Umuzi South Burlington, Vermont, is trialing uhlelo lokubhalisa umhlaba esebenzisa blockchain njengengxenye uhlelo ngokurekhoda ubunikazi.
IHhovisi wedolobha imemezele ngoMsombuluko ukuthi kwathiwa ne blockchain uqalisa Propy ukugcina umhlaba irekhodi ukuphathwa idatha, ngokusho ukukhululwa press. Inhloso Umshayeli sika ukuthuthukisa ileja iyashelela futhi ivikelekile ukuze isetshenziswe yibo izindlu nezindawo ukuthengiselana nge umgomo ezengeziwe yokuhlaziya kahle indlela usebenzisa platform blockchain ezisekelwe kuzonciphisa izindleko ukugcina idatha nokuphathwa kokusetshenziswa komhlaba uma iqhathaniswa izinhlelo yendabuko.
South Burlington sika wedolobha, Donna Kinville, uthe idolobha “njalo nesithakazelo sibambe ubuchwepheshe ezikhulisa kwezidingo zayo izinsiza izakhamuzi. Sikulungele afunde kulokhu umshayeli Propy.”
Nordea yasebhange uvala abasebenzi kusukela ukuhweba Bitcoin
Nordea, ibhange LaseNyakatho Yurophu esekelwe kuzo Finland, Ukutshelile zonke zalo 31,500 abasebenzi abakwazi ukudayisa Bitcoin.
Nordea ngeke abeke ukuvinjelwa yayo Feb. 28, ngemuva ibhodi yayo bavumelana ukuba umelele ngenxa "imvelo angahlelekile" wemakethe, Okhulumela Afroditi Kellberg wathi ngocingo ngoMsombuluko.
"Kuyinto umkhuba okwandile yonkana umkhakha yasebhange ukuze unciphise-akhawunti yomuntu esebenzelana kwabasebenzi ukuze zingasivimbi ukuba ukuthatha izikhundla ku ukutshalwa zokucabangela, noma okungenzeka ubafaka ingozi ukulahleka kwezimali ngakhoke nomthelela ukuthi sinjani isimo sabo sezimali,"Kellberg wathi. "Nordea ke, njengazo zonke amabhange, unelungelo lokuthathwa njengomsulwa ebekwe izinqubomgomo kule ndawo ezisebenza abasebenzi bayo. "
Nordea wathi inqubomgomo "kuhlanganisa izinhlinzeko zesikhashana abasebenzi nge Holdings ekhona futhi ivumela okuhlukile ezithile." Abasebenzi usunayo Bitcoin kuthiwa "ovumelekile ukugcina Holdings ekhona."
Nordea kuyinto ibhange wokuqala eziyinhloko zaseYurophu ukuphoqelela ukuvinjelwa ezifana.
Thumela Previous:Ngubani John Hyman, noma yini esiyaziyo mayelana yocingo utshalomali umeluleki
Thumela Landelayo:Robotrading noma Ukuhweba imanuwali